Ithiphu esheshayo: Isiphathi Somaka seGoogle > UVielhuber David
Ithiphu esheshayo: Isiphathi Somaka weGoogle06
Umphathi Wethegi yeGoogle uzimise njengezinga le-de facto lokuhlanganiswa kwezikripthi zokulandela umkhondo. Ngale ndlela, ngakolunye uhlangothi, izibopho (ukumaketha oku-inthanethi kuqhathaniswa nezinhlelo) kuhlukaniswe ngokusobala futhi, ngakolunye uhlangothi, ungasetha ngokushesha futhi uguqule ukulandela ngomkhondo ngesiteshi esengeziwe sokuhambisa. Nawa amathiphu amabili amancane wokusetha izimbangela.
Lapho udala izimbangela, umuntu uvame ukukhetha inketho "Qondanisa nesikhethi se-CSS" njengohlobo lwe-trigger. Isibonelo, uma ufaka inani .foo .bar .button , kuyenzeka kwenzeke ukuthi inhlamvu ingaqalisi ngokuthembekile. Isizathu salokhu imvamisa ukuthi ezinye izinto ze-HTML (isb. <span> izinto zesitayela esingeziwe) zingafihlwa ngaphakathi kwento yenkinobho. Uma uqhafaza kulezi zinto zezingane ngqo, inhlamvu ayidubuli - umcimbi awusatshalaliswa esigungwini sabaphathi be-DOM (hhayi ukubhebhetheka). Ukugwema lokhu, phinda isikhethi bese ufaka isikhethi "" * Esibonelweni sethu, isisho sonke sithi .foo .bar .button, .foo .bar .button * .
Njengethiphu lesibili, kube nokuziphatha okuphazamisayo kusiphequluli seSafari kusukela i-iOS 10.2 (kuze kufike enguqulweni yamanje): Uma ulandela i-mailto: izixhumanisi, umyalezo olandelayo uvela ngaphansi kwezimo ezithile ngemuva kokuthinta isixhumanisi:
Lapha uhlobo lwe-trigger " Chofoza - Izixhumanisi kuphela " lwenziwe lwasebenza ngenketho " Linda amathegi ". Lokhu kubambezela ukwenziwa kwelitshe lokuxhumanisa langempela, okuholela kumyalezo ongenhla. Ngemuva kokukhubaza inketho, inkinga ayisenzeki. Ngenye indlela, futhi ungasebenzisa uhlobo lwe-trigger " chofoza - zonke izinto " futhi ucacise ilitshe ngokunembile ngangokunokwenzeka njengesixhumanisi usebenzisa isikhethi se-CSS.